Qatar Airways ayaa heshay 5-Xiddig COVID-19 Qiimeynta Amniga Diyaaradaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways ayaa heshay 5-Xiddig COVID-19 Qiimeynta Amniga Diyaaradaha
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Caafimaadka Warka • News • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways ayaa sii waday duulimaadkeeda dhammaan COVID-19, iyadoo la wareegtay 3.1 milyan oo qof guryahooda tan iyo markii uu billowday cudurkan
Qatar Airways ayaa noqotay diyaaraddii ugu horreysay ee caalami ah ee adduunka gaarta si loo gaaro sumcadda 5-Star COVID-19 ee Qiimaynta Badbaadada Duullimaadka ee shirkadda caalamiga ah ee qiimeynta gaadiidka hawada, Skytrax.
Ogeysiiska ayaa daba socda baaritaan xisaabeed faahfaahsan, oo ay sameeyeen kooxda Skytrax bishii Diseembar 2020, kaas oo qiimeeyay sida wax ku oolka ah ee joogtada ah ee shirkadda duulimaadyada adag ee COVID-19 iyo heerarka nabadgelyada iyo habraacyada loo hoggaansamayo, laga bilaabo duulimaadka duulimaadka illaa diyaaradda. Tani waxaa ka mid ahaa dib u eegis buuxda oo ku saabsan hubinta waxqabadka nidaamka, u fiirsashada muuqaalka nadaafadda iyo heerarka nabadgelyada dhammaan heerarka safarka rakaabka, iyo tijaabooyinka tijaabinta ee Adenosine Triphosphate (ATP) si loo cabbiro heerka suuragalka ah ee faddaraynta meelaha xiriirka.
Ku guuleysiga Skytrax 5-Star Covid-19 Qiimeynta Badbaadada Duulimaadyada waxaa sii dheer guriga iyo xarunta Qatar Airways, Hamad International Airport (HIA), oo dhowaan loo magacaabay garoonkii ugu horreeyay ee Bariga Dhexe iyo Aasiya ee lagu abaalmariyo Skytrax 5-Star COVID-19 Qiimeynta Badqabka Madaarka ee Diseembar 2020.
Qatar Airways Madaxa Kooxda, Mudane Mr. Akbar Al Baker, wuxuu yiri: “Anagoo ah hogaamiye warshadeed iyo 'Duulimaadka ugu fiican aduunka', ee ay magacowday Skytrax, waxaan si fiican ugu baranay dejinta heerka ay kuwa kale raacayaan. Waxaan ku faraxsanahay in ballanqaadkeena ah bixinta barnaamijka badbaadinta ugu adag ee dhameystiran ee COVID-19 ee ka dhex jira bulshada duulimaadyada caalamiga ah lagu aqoonsaday Skytrax 5-Star COVID-19 Qiimeynta Badbaadada Duulimaadyada.
“Guushan waxay muujineysaa tallaabooyinka degdegga ah iyo hannaanka Qatar Airways ay ugu shaqeysay inay ilaaliso caafimaadka iyo samaqabka rakaabkeenna guud ahaan aafada adduunka illaa maanta, waxayna daba socotaa guushii ugu dambeysay ee HIA oo ah garoonkii ugu horreeyay ee Bariga Dhexe iyo Aasiya ee la siiyo Skytrax 5 -Star COVID-19 Qiimeynta Amniga Madaarka.
“Waxay sidoo kale u xaqiijineysaa rakaabka adduunka oo dhan in heerarka caafimaadka iyo amniga shirkadaha duulimaadyada ay ku xiran yihiin heerarka ugu sarreeya ee suurtagalka ah ee xirfadeed, baaritaan madaxbannaan iyo qiimeyn Maaddaama Qatar Airways ay sii wadayso la tacaalidda saameynta iyo caqabadaha socda ee dhibaatada COVID-19, waxaan jeclaan lahayn inaan xoojino farriinta ah in safarka diyaaradda uusan u baahnayn inuu noqdo mid walaac geliya rakaabka.
"Inta ka horaysa, waxaan rajeyneynaa inaan sii wadno inaan siino khibrada ugu macquulsan ee safarka adduunka oo dhan, isla markaana aan ku sii balaarino doorkeena ku aadan caawinta soo kabashada warshadaha duulista ganacsiga bilaha soo socda."
Madaxa Fulinta ee Skytrax, Mr. Edward Plaisted, ayaa yiri: “Waxaan ugu hambalyeynaynaa Qatar Airways oo la siiyay abaalmarinta ugu sarreysa 5-Star COVID-19 Safety Rating oo ay tahay shirkaddii ugu horreysay ee caalami ah ee heerkan lagu caddeeyo. Qatar Airways ayaa sii waday duulimaadkeedii COVID-19, iyadoo la wareegtay 3.1 milyan oo qof guryahooda tan iyo markii uu billowday cudurkan, waana khibraddan iyaga u saamaxaysa inay gaarsiiyaan heer aad u wanaagsan oo ah tallaabooyinka badbaadada caafimaadka iyo nadaafadda si ay u ilaaliyaan macaamiisha iyo shaqaalaha.
Tallaabooyinka badbaadada ee diyaaradda Qatar Airways waxaa ka mid ah bixinta qalab ilaalin shaqsiyeed (PPE) oo loogu talo galay shaqaalaha guriga ka shaqeeya iyo xirmo difaac ah oo loogu talagalay rakaabka. Rakaabka Heerka Ganacsiga ee diyaaradda ku qalabeysan ee loo yaqaan 'Qsuite' wuxuu ku raaxeysan karaa asturnaanta kor loo qaaday ee kursi abaalmarintan abaal-marinta ah ay bixiso, oo ay ku jiraan kala-goysyada asturnaanta iyo ikhtiyaarka loo adeegsan karo tilmaame 'Do not Disturb (DND)'. Qsuite waxaa laga helaa duulimaadyada in ka badan 45 meelood oo ay ku jiraan Frankfurt, Kuala Lumpur, London iyo New York.
Intaa waxaa sii dheer, shirkaddu waxay kaloo adeegsaneysaa nidaamyada ugu horumarsan ee sifeynta hawada HEPA ee saaran dhammaan diyaaradaha, dhawaana waxay noqotay shirkaddii ugu horreysay ee caalami ah ee soo bandhigta Honeywell qaabkeeda casriga ee Ultraviolet Cabin, oo ay maamusho Qatar Aviation Services. Nadaafada diyaaradaheeda. Faahfaahin buuxda oo ku saabsan dhammaan tallaabooyinka laga fuliyay gudaha iyo HIA, fadlan booqo qatarairways.com/safety.